Xog: Caawimada la xidhiidha Aaska (Help paying for Funeral) (In Somali) – Horn of Africa foundation
Xog: Caawimaada la xidhiidha Aaska
(Help paying for Funeral) (In Somali)
Ma ogtahay inay jiraan caawimaad la xidhiidha aaska. Waxa aan ku jirnaa xilli ay bateen duruufaha jira dhinac dhaqaale iyo caafimaadba. Xanuunka caabuqu waxuu sabab u noqday dad badan oo asxaabteena, eheladeena iyo xigaalba inoo aha, waxaana sii dheer duruufaha shaqsi ee ku gadaaman.
Taas oo sababi karta inaad la kulantid baahi la xidhiidha qof aad jeceshahay oo ehelkaaga ah, ama asxaabtaada ah oo raba in laga caawiyo aaska.
Tusaale ahaan, hadaad qaadatid dhaqaalahan hoose ee danyarta laga kabo sida:
Hadaad kamid tahay bulshada qaata taakuladaas kore, waxaad xaq u yeelanaysaa in lagaa caawiyo dhaqaalaha aaska.
Dhaqaalahaas waxaa toos loogu shubaya shirkada u qaablisan adeega aaska (Tusaale ahaan masaajidka duugista marxuumka u qaabilsan). Sidoo kale , hadii aad jeebadaada ka bixisay, waxaad ku dalban kartaa mudo 6 bilood gudahood ah iyada oo Bangigaaga laguugu soo shubayo.
Yaa dalban kara, maxuuse noqon karaa xidhiidhka ka dhaxeeya qofka codsanaya kaalmadan iyo Marxuumka/ Marxuumada la aasayo,
Qofka dalbanaya waa inuu noqdo qof kamida shaqsiyaadkan hoose:
Waalidka ilmaha saqiiray isaga oo ifka usoo bixin balse jiray 24 todobaad .
Waalidka, ilmaha saqiiray ee ka yar 16 sano, ama haduu jiray 20 sano balse uu ku jiray waxbarasho la aqoonsanyahay.Qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in si sharaf iyo karaamo leh loo aaso. Hadaba haday jiraan qof qoyskaaga ah ama qaraabadaa ah ama saaxiibka ah, oggow waxaa jira taakulo aad heli kartid oo aad xaq u leedahay.